कोरिया क्वारेन्टाइनबाट नेपाल सम्झिँदा...
मीनराज पोख्रेल सोमबार, फागुन ३, २०७७, २२:०६
यता, दक्षिण कोरियाको अवस्था भने अलि फरक छ। यहाँ कोरोनाको संक्रमण सुरुको एक चरणमा निकै तीव्र रुपले बढेको भएपनि महामारी विस्तारै नियन्त्रणउन्मुख छ। तर नियन्त्रणको लागि अपनाइएका मापदण्ड भने झन् कडा पारिएको छ। मास्कको प्रयोगलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ, मास्क नलगाएको खण्डमा १ लाख कोरियन वनसम्म जरिवानाको नियम छ भने ठूला चर्च, होटल तथा रेष्टुरेण्ट, क्लब र विद्यालय समेत सहज रुपले खुल्न सकेका छैनन्। अझ भनौं, भौतिक दूरीलाई थप कडाइ गरिएको छ।
म केही दिनअघि बुबाको आकस्मिक निधनले कोरियाबाट नेपाल जानुपर्ने भयो। अहिले नेपालबाट फर्केर यहाँको क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छु। यतिबेला कोरियाबाट बिदामा जान, आउन होस् वा अन्य कुनै कारणले आउजाउमा यहाँको सरकार, अध्यागमन विभागले कडाइ गरेको छ। कोरियाले केही देशलाई बाहेक सबै देशमा सिधा हवाई उडानलाई विच्छेद गरेको छ। विदेश भ्रमण जान आफ्ना नागरिकलाई पनि कडाइ गरेको यहाँको सरकारले विदेशी श्रमिकलाई पनि अति इमर्जेन्सी बाहेकमा बिदा स्वीकृत समेत दिएको छैन।
इमर्जेन्सीमा पनि के-कति कारणले जान लागेको हो भन्ने प्रमाण सम्बन्धित देशबाट नआएसम्म अनुमति दिइँदैन। पुन: प्रवेशको अनुमतिको भिसा नलिई बिदामा जानेहरुलाई फर्कन कडाइ गरिएको छ। मैले पनि नेपालबाट आवश्यक पर्ने कागजातहरु नाता प्रमाणित, मृत्यु दर्ता लगायतका प्रमाणहरु जुटाई ३ महिनाको रि-इन्ट्री अनुमति लिएर नेपाल गएको थिएँ।
नेपालसँग सिधा उडान नभएको हुँदा कोरियाबाट दुबई ट्रान्जिट गरी नेपाल जान महँगो शुल्कमा हवाई टिकट लिई जानुपर्ने बाध्यता थियो र अझै पनि छ। नेपाल सरकार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय, नेपाल वायु सेवा निगमले आवश्यक समन्वय तथा नियमन गर्न नसक्दा ट्राभल्स एजेन्सीहरुको एकलौटी मनोमानी सहन बाध्य हुनुको विकल्प थिएन। जे-जसरी भए पनि कठिन अवस्थामा यात्रा गर्न पाउँदा शुल्कसँग खासै महत्व नहुँदो रहेछ। आकस्मिक समयमा आउन-जान पाउनु नै ठूलो कुरा हुँदो रहेछ।
सामान्य अवस्थामा दक्षिण कोरियादेखि काठमाडौंसम्म सिधा हवाई उडान हुँदा ६ घण्टाको समय लाग्ने भएपनि दुबई हुँदै नेपालसम्म पुग्न १४ घन्टा आकाश र ट्रान्जिट समय ४ देखि ८ घन्टासम्म एकातिर थियो भने अर्कोतिर जे-जसरी हुन्छ, नेपाल पुग्नु र सकुशल फर्केर पुन: काममा लाग्नु थियो।
कोरियाबाट ३ महिनाको रि-इन्ट्रीको भिसा लिएर गएको भए पनि सहजै टिकट काटेर कोरियाबाट नेपाल फर्कने अवस्था भने थिएन। कोरिया आई १४ दिन क्वारेन्टाइन अनिवार्य बस्नुपर्ने हुँदा यसको लागि आफू कहाँ बस्ने हो, त्यो यकिन भएर एचआरडी कोरिया हुँदै नजिक रहेको हेल्थ सेन्टर (फोगन्सो) बाट उपयुक्त छ भनी प्रमाणित गरेको क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट अनिवार्य चाहिने थियो।
नेपाल पुगेपछि क्वारेन्टाइनको अनुमतिको लागि नेपाल एचआरडीसँग अनुरोध गरी यहाँबाट प्रमाणित भएपछि मात्र फर्किनको लागि टिकट काट्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। कम्पनीले सहयोग गरेर आवश्यक समन्वय गरेमा क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट छिट्टै जारी हुनसक्छ तर आफैं खोज्नुपर्ने अवस्था वा अन्य एजेन्टमार्फत गर्नुपर्ने भए केही समय थप लाग्न सक्छ।
जब कोरियासम्मको हवाई यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फ्लाई दुबईमार्फत दुवई एयरपोर्ट आयौं र त्यहाँ करिब ४ घन्टाको ट्रान्जिटपछि इमिरियट्सको फ्लाइटमार्फत् इन्छन कोरिया आउन तयार भयौँ।
मेरो सबै डकुमेन्ट ठिकै थियो। काठमाडौंमा पनि मलाई खासै सोधपुछ गरिएको थिएन। तर यहाँको अध्यागमनले मलाई अनावश्यक दु:ख दियो, रिस पनि उठ्यो। बुझ्दै जाँदा मेरो रि-इन्ट्रीको समय हेरेर भिसा १ महिना मात्र छ, किन बिदामा गएको भन्ने त्यहाँको कर्मचारीलाई लागेछ र तुरुन्त कोरियन अध्यागमनलाई उसले फोन लगायो र मेरो नाम, जन्म मिति बताइसकेपछि यताबाट सबै डकुमेन्ट्सहरु हेरेर बल्ल भित्र छिर्न दिइयो।
क्वारेन्टाइन जाँचपछि हामी सरासर अध्यागमनतिर लाग्यौं। अध्यागमनमा अहिले पासपोर्ट भिसा र अन्य डकुमेण्टसँगै कोरोना परीक्षण रिपोर्ट र क्वारेनटाइन सटिर्फिकेट पनि प्राथमिकता साथ हेर्दो रहेछ। त्यसपछि हाम्रो मोबाइल फोन मागियो र सबैका मोबाइलमा "सेल्फ क्वारेन्टाइन सेफ्टी प्रोटेक्सन" नामको मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न लगाइयो। अनि हाम्रो सम्पूर्ण विवरण जस्तै: फोन नम्बर, कम्पनीको नाम, क्वारेनटाइनको ठेगाना, सम्पर्क व्यक्ति, सबै भरेर हाम्रो लोकेसन ट्र्याक गरेपछि मात्र मोबाइल फिर्ता दिइयो।
हामीलाई सोधपुछ भयो- कहाँ जाने?, केमा जाने? बस, ट्याक्सी, ट्रेन केमा जाने हो त्यही अनुसार ज्याकेटको बाहिर संकेत लेखिएको स्टिकर टाँसेर लामबद्ध गरियो।
उक्त एपमा दिनमा २ पटक सेल्फ डाइग्नोस अप्सनमा गएर आफ्नो सम्पूर्ण स्वास्थ्य अवस्थाबारे अपडेट गराउनुपर्ने अनिवार्य सर्त रहेछ। हामी सबै कुरामा सहमति जनाई अध्यागमनको सम्पूर्ण जाँच पूरा गरेर लगेजको लागि भुइँ तलामा पुग्यौं। यसपछिको जाँच पनि अलि कडा नै थियो। एन्टी डिस इन्फेक्टेन्ट स्प्रे राम्रो सँग छर्केपछि मात्र हामीलाई लगेज दिने काम भयो। कुनै पनि औषधिजन्य पदार्थ वा धातुजन्य वस्तुलाई बढी नै सोधपुछ हुन्थ्यो। सेक्युरिटीमा रहेका कर्मचारीसँगै २ वटा कुकुरलाई सुंघाएर यात्रुले लगेका सामान यकिन भएपछि मात्र लैजान पाउने व्यवस्था थियो।
हामी यी सबै प्रक्रिया पूरा गरी एयरपोर्ट बाहिर के निस्केका थियौं, त्यहीँ हामीलाई सोधपुछ भयो- कहाँ जाने?, केमा जाने? बस, ट्याक्सी, ट्रेन केमा जाने हो त्यही अनुसार ज्याकेटको बाहिर संकेत लेखिएको स्टिकर टाँसेर लामबद्ध गरियो।
म सबैभन्दा टाढा बुसान आउनुपर्ने भएकोले केटिएस ट्रेन लाइनमा बसेँ। ट्रेन त्यहाँबाट सिधै नआउने हुँदा बस चढी करिब डेढ घन्टामा बल्ल ग्वाङ्ग्म्यङ ट्रेन स्टेसनमा आएँ। त्यहाँ आइपुग्दा लगभग रातिको साढे आठ बजेको थियो। करिब १० बजेतिर ट्रेन चढी बुसान स्टेसन पुग्दा रातिको १२:१७ बजेको थियो। त्यहाँ हेल्थ सेन्टरका व्यक्तिहरु अस्थायी संरचना हेल्थ डेस्क बनाएर बसेका रहेछन्।
हामी ट्रेनबाट झर्ना साथ डेस्कमा गएर फेरि लामबद भएर बस्यौं र पालैपालो कोरोना परीक्षणको लागि स्वाब दिने काम भयो। कोरोना टेष्टको लागि स्वाब दिएको पनि चौथो पटक थियो। स्वाब दिएर हामी बाहिर निस्कियौं। त्यतिन्जेल हामीलाई लिन बुसानस्थित कनेक्ट होटल (हामीले पहिले नै बुक गरेको) को गाडी आइसकेको रहेछ। मसँगै उक्त होटलमा क्वारेन्टाइन बस्न त्यो दिन ४ जना कोरियन पनि सँगै थिए। हामी होटलमा आयौँ र सबै दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेर होटलको आआफ्नो कोठातर्फ लाग्यौं।
ब्युँझदा बिहान ९ बजिसकेको थियो। आज पनि कोठामा २ पटक तापक्रम नापेर लेख्नुपर्ने थियो। ढोकामा गते, समय लेखेर टाँसिएको पेपर थियो। उक्त पेपरमा लेख्न यसो निस्केको थिएँ, ढोका बाहिर खाजाको पोको पो राखिएको रहेछ। हिजो राति होटलवालाले कोरियन भाषामा भनेको राम्रोसँग ध्यान दिएर नसुनेकोले हो या राम्रोसँग नबुझेकोले हो, खाजा, खाना लिन आफैं जानुपर्ने होला भन्ने लागेको थियो तर होइन रहेछ। बिहान ७:१५ मा ब्रेकफास्ट, ११:१५ मा खाना र साँझ ५:१५ मा बेलुकाको खाना आफैं प्याकिङ गरेर ढोका अगाडि पोको पारेर छाडिदिने अनि बेल बजाइदिने चलन रहेछ।
प्याकिङ खानाको पोको लगेर आफ्नो इच्छाअनुसार जतिबेला खाए पनि हुने भयो। ल्याउँदै चिसो भइसक्ने खाना जति समय राखे पनि फरक नपर्ने भयो। होटेलमा दिनको कोरियन १ लाख वन करिब नेपाली १० हजार तिर्नुपर्थ्यो। पैसा तिरेअनुसार सुविधा पनि राम्रो थियो। सबै कुरा कोठामै एट्याच थियो। हुन त बाहिर जान त के झ्यालबाट बाहिर टाउको झिकेर हेर्न पनि नमिल्ने खालका नियम छन्। धन्न मेरो रुमको बाहिर सानो बरण्डा थियो र यसो बेलाबेलामा आउन पाइन्थ्यो। बाटोतिर नजिकै भएको बुसान टावर, अगाडिका अपार्टहरुतिर हेर्न सकिन्थ्यो।
मेरा लागि कोरियाको क्वारेन्टाइन बसाइ कत्ति पनि पट्यारलाग्दो थिएन। सबै मापदण्ड पालना गरेर राखिएको छ। बस्ने ठाउँदेखि खानेकुरा सन्तुलित किसिमले व्यवस्थापन गरिएको छ। दिनमा तीन पटक खाना त्यसमा पनि दिनैपिच्छे फरकफरक आइटम, कोठामा पनि तातो-चिसो सबै व्यवस्था भएको। बाहिर चिसोले तापक्रम माइनस हुँदा पनि कोठामा आनन्दले पातला कपडामा सुत्न मिल्ने थियो। वाइफाई, टेलिफोन, टिभी सबैको व्यवस्था मिलाइएको छ। गर्नुपर्ने काम पनि आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइ र खाना खाने बाहेक अरु केही थिएन। दिनभरि एकलै बस्दा बोरिङ हुनु स्वभाविक हो तर लेख्न र पढ्नमा रुचि हुनेका लागि भने १४ दिन क्वारेन्टाइन बस्नु खासै गाह्रो थिएन।
क्वारेन्टाइनको बसाइमा मलाई लाग्यो, साँच्चै कोरियाको विकास त्यसै भएको होइन। यहाँका कर्मचारी यति धेरै इमान्दारिताका साथ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लागेको देख्न सकिन्छ। जनतामा पनि इमान्दारिता, अनुशासनको कडा पालना देख्न सकिन्छ। यहाँका सडकमा प्रहरी देखिँदैनन् तर पनि नियम पालना शतप्रतिशतले भइरहेको हुन्छ। सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेको छ।
आउनुस्, अब यस्ता भाष्य भत्काऔं जिल्लाको कार्यक्रममा भाग लिँदा अगाडि र पछाडि गाडीका लस्कर कुदाउने। अलि अलि भएका खाल्डाखुल्डी एक दुई दिन अगाडि नेताको प्रोटोकल अनुसार... आइतबार, वैशाख ५, २०७८
पोखरा हान्ने निर्णय छाडेर किन बन्दीपुर कब्जा गर्‍यो कांग्रेसले? तनहुँको पुरानो सदरमुकाम बन्दीपुर आज गुल्जार पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनिन्छ। घुमघामका पारखीलाई यसले आफूतिर खिचिरहन्छ। यसको सुन्दरता... शनिबार, वैशाख ४, २०७८
नयाँ वर्षमा महामारीलाई जित्‍न सकाैं महामारी नभएको भए, परदेशमा पनि टाढा, टाढा रहेका साथीभाइ साँझ जम्मा भएर रमाइलो गरिने थियो। खाएर, पियरमात्र रमाइलो हुन्छ भन्‍ने कुरा नि... बुधबार, वैशाख १, २०७८